I-Garden view Studio e-Mon Choisy Beach Residence - I-Airbnb
I-Garden view Studio e-Mon Choisy Beach Residence
Mon Choisy, i-Mauritius
Igumbi e-ifulethi eliyihhotela ibungazwe ngu-Justine
Jabulela ukunethezeka kwesitudiyo sethu sokubuka ingadi eshisayo ngenkathi ufinyelela kuyo yonke indawo yokuhlala okuhlanganisa nechibi elinosawoti le-Infinity elinezindawo zokuphumula ezibheke echibini elidume umhlaba wonke i-Mon Choisy turquoise, izinyathelo ezisuka kude nolwandle oludumile.
I-Mon Choisy Beach Residence iyihhotela eliqhelelene elinikeza izitudiyo ezibanzi, ezine-air conditioning (28) ezinamathala noma ovulandi ababheke ingadi yethu yasezindaweni ezishisayo egcinwe kahle.
Isitudiyo ngasinye singu-36m2 futhi sinikeza ithala elithokomele, ikhishi elihlonyiswe ngomshini wekhofi we-Lavazza, i-TV yesathelayithi yesikrini esiyisicaba kanye nezindlu zangasese zesimanje. Indawo yokuhlala igqamile futhi ihlotshiswe kahle ngamathayela aphansi kanye nefenisha yokhuni futhi iyaseviswa nsuku zonke.
I-Wi-Fi inikezwa kuyo yonke indawo yokuhlala, kanye nendawo yokupaka. Izinsizakalo zokuwasha nezokugada izingane nazo ziyatholakala uma uzicelile.
Izivakashi zingalungisa ukudla kwazo ngasese ngendawo yazo, zisebenzisa ikhishi lazo elihlome ngokuphelele.
Sinikeza izivakashi zethu isidlo sasekuseni sase-continental ngemali eyengeziwe ehlinzekwa ekamelweni kusukela ngo-07h30 kuya ku-10h00 a.m. Ukudla kwasemini nedina, nakho okulethwa ekamelweni, kunga-odwa ekwamukeleni.
Njalo ebusuku, i-shuttle yamahhala iyisa izivakashi zethu e-Le Skipper Restaurant etholakala e-Pointe aux Biches ukuze uthole isidlo sakusihlwa se-à la carte, uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka e-Mon Choisy Beach. Indawo yokudlela inikeza ukudla okuyiqiniso kwaseMauritius. Iyingxenye yehhotela elingudadewethu elithi "Voile Bleue" futhi yaziwa kakhulu ngobusuku bayo obunetimu yase-Mauritius ngoLwesithathu.
I-Mon Choisy Beach Residence iyihhotela eliqhelelene elinikeza izitudiyo ezibanzi, ezine-air conditioning (28) ezinamath…
4.50 (izibuyekezo ezingu-50)
Inyakatho yesiqhingi inamabhishi amaningi, ngalinye lihle kakhulu kunolunye. Ezidume kakhulu kubantu baseMauritius kanye nezivakashi i-Trou aux Biches Beach egubuzelwe ama-casuarinas, ulwandle olude, olujikayo lwase-Mon Choisy oluqhubeka lusuka ePointe aux Canonnies luye e-Grand Baie, kanye nasebhishi lomphakathi laphezulu lasePereybere.
Elinye idolobhana elihle elisenyakatho yeMauritius yiCap Malheureux, enesonto layo elidumile elinophahla olubomvu, umbono wayo weziqhingi ezisenyakatho nomphakathi wayo obalulekile wokudoba.
Maningi amanye amadolobhana amahle nemisebenzi okufanele yenziwe kalula kule ndawo, futhi, ummeleli wethu wendawo ulapha ukuzokusiza ukuhlela.
Uzothola Ukuhwebelana Kwangaphandle, isitolo segrosa, izitolo, izindawo zokudlela kanye nekhemisi eTrou aux Biches (1.6 km). I-aquarium yaseMauritius iqhele ngamakhilomitha ayi-6.
Eduze kwendawo yokuhlala uzothola eMon Choisy Beach (amamitha ayi-100): imidlalo yasemanzini, i-scuba diving (amamitha angama-650) nezindawo zokudlela.
Imakethe eseduze kakhulu iseGrand Baie.
Amalungu eqembu lethu anobungane azohlangana futhi akubingelele lapho ufika. Ukwamukela kwethu kuvulwa nsuku zonke kusukela ngo-8.00 ekuseni kuya ku-11.00 p.m. (08h - 23h). Esimeni esiphuthumayo, umlindi wethu ulapha ukuze akusize noma ashayele umphathi wethu, uPravesh uma kudingeka.
Sinakho uma udinga noma yiluphi ulwazi noma usizo. Singajabula ukukusiza ukuthi uhlele imisebenzi eminingi yangaphandle ehlanganisa ukutshuza nokugibela amahhashi.
Amalungu eqembu lethu anobungane azohlangana futhi akubingelele lapho ufika. Ukwamukela kwethu kuvulwa nsuku zonke kusukela ngo-8.00 ekuseni kuya ku-11.00 p.m. (08h - 23h). Esimeni…
Hlola ezinye izinketho ezise- Mon Choisy namaphethelo